By soniya on	 19th July 2019 Highlights, समाचार, समिक्षा
घर सुरु हुन्छ : अँध्यारो भर्‍याङमा तैरिएको क्यामेराको सट्स र डरलाग्दो पाश्र्वध्वनीबाट । अनि सुरु हुन्छ दर्शकलाई डराउन दिने प्रयत्नको अर्पण थापा सिलसिला । खासमा, ‘घर’ भूतले तर्साउनेभन्दा ‘प्यारानर्मल एक्टिभिटी’ बढी हो । अहिले हरर विधाका निर्देशक दर्शकलाई त्रसित बनाउन भूत हैन, ‘प्यारानर्मल एक्टिभिटी’को आइडिया लिन थालेका छन् ।
फिल्मको बटमलाइन हो : दैत्य शक्ति भर्सेस मिथ । यदि यसलाई प्रिक्वेल मान्ने हो भने, ‘घर’को भाग १ फिल्म स्थापनामै टुंगिएको छ किनभने द्धन्द्ध र निष्कर्ष अपुरा छन् । उल्लेखनीय पक्ष के छ भने, नेपाली हरर जनरमा ‘घर’ले कथ्य परम्परा अभ्यासको मानक चाहिँ सेट गर्नेछ । किनभने, हररकै उप–जनरभित्र रहेर पहिलोपटक प्रयत्न भएको छ ।
काठमाण्डौंको कुनै थलोमा सस्तो घर किनेर बसाइ सरेको एउटा मध्यमवर्गीय दम्पत्तिको जीवनमा आउने उतारचढाव वरपर फिल्मले फन्को मार्छ । भूतले तर्साउने भन्दै छाडिएको घरमा बसाइ सरेपछि अर्पण थापा र सुरक्षा पन्तको जीवनमा अस्वभाविक द्धन्द्ध देखिन थाल्छन् । घरको एभिल फोर्सले उनीहरुलाई यति डिफेन्सिभ परिस्थितीमा छाडिदिन्छ कि जहाँ फिल्म टुंगिएको छ र सिक्वेल बनाउने घोषणा समेत गरिएको छ ।
फिल्ममा भूत र मान्छेको लडाइ मात्र छैन । भेना र सालीबीच पोर्नोग्राफी द्धन्द्धदेखि सामाजिक मूल्यसँगको टकराव यसभित्र छन् । हलिउडमा कन्जुरिङ र एनाबेल सिरिजमा अभ्यस्त दर्शकलाई घरले थोरै भएपनि ‘नेपाली–नाइज’ गरेको छ । किनभने, भूत पात्रको डीएनए नेपाली परम्परा र मिथसँग जोडिएको छ । तर, फिल्मको पटकथा कमजोर छ । एभिल फोर्ससँगको द्धन्द्ध निर्माण जरुरी थियो । निर्देशकीय नियत तर्साउन मात्र दिने जस्तो देखिन्छ जसले गर्दा ‘एन्टी–काउन्टर’ पक्ष कमजोर छ ।
पाश्र्वध्वनी, क्यामेरा, प्रकाश संयोजन र अभिनय बलियो छ । ब्याकग्राउन्ड स्कोरले त्रासको मनोविज्ञान सिर्जना गर्न भूमिका खेलेको छ । ध्वनी इन्जिनियरिङ राम्रो छ । क्यामेराले खिच्दैन मात्र, अभिनय पनि गर्छ । क्यामेरा तैरिन्छ र एक्टिङ गर्छ । हरर विशेषता भनेकै क्यामेरा एक्टर पनि बन्नु हो । प्रकाश संयोजन प्राकृतिक छ । मुड सिर्जना गर्ने खालका सट् र दृश्य छन् । बेनिशा हमाल, सुरक्षा पन्त र अर्पण थापाको अभिनय मन जित्ने भैहाल्यो ।
के तपाईं भूतका कथा र तर्साउने दिने एभिल फोर्सका फिल्मसँग अभ्यस्त हुनुहुन्छ ? यदि यसो हो भने ‘घर’ तपाईंँका लागि योग्य हुनसक्छ । एडल्ट फिल्म भएकाले बच्चा लिएर नजानुहोला । हरर नेपाली फिल्म, साहित्य, आख्यान र लोककथामा रुचाइने विधा हो । के नेपाली भूत तर्साउन सक्षम होला ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न बन्न सक्छ ।
कास्ट : सुरक्षा पन्त, बेनिशा हमाल, अर्पण थापा, अस्मिता खनाल
छायाँकार : नीरज कँडेल
ब्याकग्राउन्ड स्कोर : इमानविक्रम शाह